Ubungozi bokuzishelela endodeni
UXWAYISA abesifazane ngomkhuba wokuzishelela kwabesilisa uMnuz Dalisu Mbatha oyiPsychologist, othi lokhu kungabadonsela abahlukumezi Isithombe: FACEBOOK
ZANELE MTHETHWA | January 8, 2020
ISEMATHENI ezinkundleni zokuxhumana indaba yokuthi lona wunyaka wokuthi izintokazi zizishelele ezinsizweni. Lokhu kwenziwa wukuthi * -2020 ubizwa ngeLeap Year ngenxa yokuthi unezinsuku ezingu-366.
Usuku olungeziwe onyakeni uFebhuwari 29, okuyinto eyenzeka kanye emuva kweminyaka emine.
Ngokuthola kweSolezwe kuthiwa okwenza lo nyaka umataniswe nokuzishelela ezintokazini, wukuthi kususelwa esikweni lase-Ireland.
Kuthiwa leli siko laqalwa nguSt Brigid ngoba ekhala ngokuthi abesifazane balinda isikhathi eside bengagani ngoba belinde ukucelwa umshado ngamadoda.
Leli siko laqalwa lenziwa njalo ngoFebhuwari 29, lapho abesifazane benikwa ilungelo lokuthi bakhethe indoda abayithandayo bashele, bazicelele nomshado. Kuthiwa leli siko ladlulela naseScotland njengoba lo mkhuba usuwaziwa umhlaba wonke.
Kusukela kuqale lo nyaka izinsizwa ziyakhala ezinkundleni zokuxhumana kanti nabesifazane abazibekile phansi, bathi baphume umkhankaso wokushela. Sekukhona ngisho abaveze ubufakazi bezinkulumo zabo zangasese, beshelwa ngabesifazane ezinkundleni zokuxhumana.
UMnuz Dalisu Mbatha oyiPsychologist, uthe yize okwamanje lo mkhuba usabukeka ubakitaza abaningi, kungenzeka abanye ubashiye nezinhliziyo ezibuhlungu.
Yize uMbatha ethi nabesifazane banawo amalungelo, uthe kumele baqaphele ubungozi balokhu. Uveze ukuthi esikhathini samanje kunenkinga yamadoda ahlukumezayo, okungenzeka asebenzise leli thuba lokushelwa.
“Ubungozi bale nto wukuthi owesifazane uzoshela kubhuti kanti uwumhlukumezi. Kumanje sinenkinga yabesifazane abahlangana namasoka ezinkundleni zokuxhumana bese beyahlukunyezwa uma behlangana nawo. Uma lo mkhuba uzongena okwangempela kwabesifazane, bazozibizela ukuhlukunyezwa,” echaza.
Uthe kukhona nobungozi bokuhlukunyezwa obubizwa ngeCyber Bullying ngoba amanye amadoda azoveza izinkulumo zangasese esidlangalaleni, bese kulimaza umqondo wowesifazane.
UMbatha uthe yize siphila esikhathini sesimanje, akukajwayeleki ukuthi owesifazane azishelele endodeni.
Uthe akhona amadoda angavuma ukushelwa kodwa amaningi ngeke akwamukele kahle ngenxa yesiko.
Oyisazi samasiko uMnuz Madoda Zungu, uthe yize kungajwayelekile ukuzishelela kwabesifazane, ubukhona lo mkhuba nasendulo. Uthe intombi ibingalibeki ngembamba ukuthi iyashela kodwa ibizidlisa satshanyana ensizweni.
Intombi ibilandelwa uma kunomdlalo esigodini sangakubo bese odadewabo bensizwa beyikhomba ngezimpawu ezithize,” kusho uZungu.